ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေး ပြန်ရောက်လာဖို့ ဘိုးတော်ဆီ သွားလိုက်တာ (ဖြစ်ရပ်မှန် ) – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေး ပြန်ရောက်လာဖို့ ဘိုးတော်ဆီ သွားလိုက်တာ (ဖြစ်ရပ်မှန် )
ကျွန်မ နဲ့ချစ် သူဟာ လက်တွဲလာတာ ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အလိုလိုနေရင်း ” ငါတို့လမ်းခွဲကြရအောင် သူက ကျွန်မကို မချစ်တော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသစ်တွေ့နေပါပြီ လက်တွဲလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ချစ်တယ် ဆိုတာ ညာပြောခဲ့တာပါ။
သူက ချစ်သူ အသစ်နဲ့ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်တော့မှာ” လို့လာပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ ဆီသူပြန်လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာမှားနေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပြီးလိုအပ်တာတွေရှိရင် ကျွန်မပြင်ပါ့မယ်။ သူလိုတာ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သူ့အလိုကျ အားလုံးဖြစ်စေရပါမယ်။” အရင်လိုပဲ ချစ်သူ ပြန် ဖြစ်နေဖို့ ” ပဲတောင်းဆိုချင်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တာတွေကတော့ သူ့ရဲ့အေးစက်မှု၊ စိတ်မကြည်လင်မှု၊ စိတ်ရှုပ်မှု တွေမို့ ကျွန်မ ဘာလုပ်လုပ် အမှားတွေချည်းပဲ လုပ်မိနေတော့တာပါပဲ။သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကို ဆေးနဲ့ပြုစားတာ သွားလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်မဒီလုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်တဲ့အပြင် မပတသက် အနားလည်းမသွားချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အခုတော့ အချစ်စိတ်နဲ့ သူသာပြန်လာမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို လုပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဘိုးတော် ရာစီ ဆီကိုခေါ်သွားမယ်တဲ့။ ဘိုးတော် က အရမ်းတော်ပါတယ်၊ သူငယ်ချင်း အမျိုးတယောက် ခင်ပွန်းက မယားငယ်နဲ့ သွားနေလို့ ဘိုးတော် က ပြန်လာအောင် ခေါ်ပေးတယ်….
ပြန်လာပြီးနောက် သူဟာ ဒီနေ့အထိပဲ သူ့ဇနီးကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်လာပြီး အသစ်ထပ်မရှာတော့ဘူး။ ဘိုးတော် အိမ်ကတထပ်အိမ်လေးပါ။ကား ၁၀ စီးရပ်လို့ရတဲ့ ကားပါကင် လေးရှိပါတယ်။ ပထမနေ့ ကျွန်မ သွားတော့ ကား ၃ စီးရပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်တော့ ထိုင်နေသူများလွန်းလို့ အိမ်အဝင်ပေါက် အပြင်တောင်ရောက်နေပါတယ်။ရီမောသံ တွေလည်း တခါတခါ အပြင်ဘက်ကို ပျံ့လွင့်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားပါတယ်။
ကျွန်မမြင်လိုက်ရတာကတော့ ” အသက် ၂၈ – ၂၉ လောက်ရှိမယ့် အမျိုးသား တယောက်ဆံပင်ရှည်၊ တကိုယ်လုံးအပြည့် ဆေးမှင်ကြောင်အရုပ်တွေ ထိုးထားတယ်။ညှို့မျက်လုံးလေးနဲ့ လက်ကစီးကရက်ကိုပြာချွေလိုက် ရီစရာပြောလိုက် ရီနေလိုက်ပေါ့…..
ဧည့်သည် တွေကလည်း တခါတလေ ရီမောလိုက်ပေါ့ ပျော်စရာကြီး။ သူကကျားသစ်ကွက်လေး ဝတ်ထားတယ်။ စွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ ဘိုးတော် ဆိုတာသူပေါ့ဘာလို့ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိနေသေးတာလဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်း က ကျွန်မ ကိုကောင်းတယ်ပြောရင် ရေရှည် ကို ဘာမှမတွေးပဲ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် နာရီဝက်လောက် စောင့်လိုက်ရတယ်။
အရင်ရောက်နေတဲ့ အုပ်စုတွေ ပြန်သွားကြပြီး ကျွန်မတို့အလှည့်ရောက်လာပါပြီ။သူငယ်ချင်း က ( ပန်း ၅ ပွင့်၊ အမွှေးတိုင် ၅ တိုင်၊ ) ငွေ ၁၀၀ ဘတ် ကန်တော့ပြီး ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မချစ်သူ နာမည် နဲ့ နေရပ်ရောရေးပြီး ဘိုးတော် ကိုပေးရပါတယ်။
ကျွန်မ နာမည် ကိုဖတ်ပြီး ကံမကောင်းဘူး၊ အချစ်လုခံရမယ်၊ ချစ်သူ နာမည် ကိုဖတ်ပြီး ဒါမင်းချစ်သူလားလို့မေးတော့ ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်မ ကဖြေလိုက်ပါတယ်။
” ဘာများမေးစရာ ရှိသလဲ “လို့ ဘိုးတော်ကမေးပါတယ်။ ခဏတာ တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ ဘာမေးရမှန်းလည်း ကျွန်မ မသိပါဘူး။သူငယ်ချင်းက လက်တို့ပြီး ပြောလိုက်လေ ဆိုတာတောင် ဘာပြောရမှန်း မသိပါဘူး။
ဘိုးတော်က မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ၅ ခါ – ၁၀ ခါထိ ဂါထာ ရွတ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ကို လှည့်ကြည့်ပြီး သူ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ အခုတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ တောင်ကြံနေပြီ။
သူကမင်းဆီကို ပြန်လာစေချင်သလား ” လို့ လှည့်မေးပါတယ်။ ” ပြန်လာစေချင်ပါတယ် “လို့ကျွန်မဖြေ လိုက်ပါတယ်။ ” ဒါဆိုရင် ငါကမင်းကိုကူညီမယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ဆောင်ခ ပေးရမှာနော် မင်းမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
” ” နှစ်ထောင်ပါရှင် ” ဘိုးတော် က မျက်စေ့မှိတ်လိုက်ပြီး ” မဟုတ်ဘူး အိတ်ထဲမှာ ငါးထောင်ဘတ် ရှိတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ဘတ် ၃ သောင်း ထပ်ရှိသေးတယ်။
” ကျွန်မအရမ်းအံ့ဩသွားတယ်။ ဘိုးတော်က ဘယ်လိုများ သိတာပါလိမ့်။ ” သူပြန်လာစေချင်ရင် ဘိုးတော် ကို ဝန်ဆောင်ခ ဘတ် ၃ သောင်း ပေးရယ်။ ” ” သဘောတူပါတယ် ” လို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းက ကျွန်မ ကို ” ရူးနေလား ဘတ် ၃ သောင်းကြီးများတောင် မစဉ်းစားတော့ဘူးလား ” အံ့ဩစွာနဲ့ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ချစ်သူ ပြန်လာဖို့ထက် ဘယ်အရာမှ ကျွန်မအတွက် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ဘိုးတော် ကကျွန်မမျက်နှာကို ပြုံးကြည့်ရင်းနဲ့“………တွေကို သွားယူခိုင်းပါတယ်။
”ကျွန်မ အစီအစဉ် စလုပ်ရန် လိုအပ်တာတွေ ယူလာခိုင်းပါတယ်။ နောက်နေ့မနက်လင်းတော့ ဘိုးတော်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ အရင်ရောက်သူတွေ များလွန်းတာမို့ နေ့လည် ၂ နာရီ မှပဲ ကျွန်မ အလှည့်ကိုရောက်ပါတော့တယ်။
ဘိုးတော် ကကျွန်မကို ပြုံးပြပါတယ်။ ” ပရိတ်ရေနဲ့ ရေသန့်စင်ရမယ် ” ဘိုးတော်က အမျိုးသား တယောက်ကို ကျွန်မအား ပရိတ်ရေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင် ပေးခိုင်းပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားကလည်း ဂါထာ တွေရွတ်ရင်း ကျွန်မကိုရေသန့်စင် ပေးပါတယ်။
ပြီးနောက် ကျွန်မယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာအောင် ရွတ်ဖတ်နေပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မလက်မှာ ပရိတ်ကြိုး ချည်ပေးပြီး သူခိုင်းတာတွေ လုပ်ရန်မှာကြားပါတယ်။
၁။ နေ့တိုင်း ညနေခင်းမှာ ကျွန်မက ခြေလှမ်း ၉၉၉ လှမ်း လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။
၂။ မအိပ်ခင် ဘုရားစာ ၉၉ ကြိမ် ဆိုရပါမယ်။
၃။ အဖေ ဒါမှမဟုတ် အမေ နဲ့ နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ပြီး ဖြစ်ပျက်သမျှကို မလိမ်ညာပဲ အကုန် ရင်ဖွင့်ပြောပြရပါမယ်။
၄။ ဒီနေ့ကစပြီး ၁၅ ရက်တိတိ ချစ်သူ နဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ရပါဘူး။ ကတိပေးထားတာ ပျက်ကွက်မိရင် နောက်တရက်မှာ အသစ်တခါစပြီး ၁၅ ရက်ပြည့်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
ဒီ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ပေးထားတဲ့ ကတိ အတိုင်း တိကျစွာလုပ်နိုင်ရင် ချစ်သူ ဟာ ကျွန်မဆီကိုပြန်လာမှာ သေချာနေပါတယ်။ ကျွန်မ ဟာ ဘိုးတော် ပြောတဲ့ အချက်တွေကို ကတိ ပေးထားတဲ့အတိုင်း တိကျစွာလုပ်သွားပါတယ်။
ပထမရက်၊ ဒုတိယရက်၊ တတိယရက်၊ စတုတ္ထရက်၊ ပဥ္စမရက်…. ၁၅ ရက် အပြီးမှာတော့ ပေးထားတဲ့ ရက်ပြည့်သွားပြီမို့ နောက်နေ့မနက်အစောကြီးပဲ ကျွန်မက ဘိုးတော် ဆီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
” ဘယ်လိုနေလဲ ခံစားနေရတာတွေ သက်သာလာတယ် မဟုတ်လား ” လို့ဘိုးတော် ကမေးပါတယ်။ ” ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ပိုချမ်းသာ နေရသက်သာလာပါတယ် ” ” သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပဲလား ” လို့ဘိုးတော် ကမေးပါတယ်။
” ဟုတ်ကဲ့ ” ” အမေ့ဆီကို နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ခဲ့ရဲ့လား ” ” ဆက်ပါတယ် ”” အမေ ဘာပြောသေးလဲ၊
သူဝမ်းနည်းနေလား ” ” အမေ ဘာမှမပြောပါဘူး၊ သူဝမ်းနည်းနေပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျွန်မ ကို နှစ်သိမ့်ချော့မော့ပါတယ်။
” ” အမေ ဝမ်းနည်းနေတော့ မင်းရောဝမ်းမနည်းဘူးလား ” ကျွန်မကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်
စပြီးစဉ်းစားနေမိပါပြီ။ ” ဝမ်းနည်းပါတယ် ”” မင်းငိုတော့ အမေ ကဘာပြောလဲ ” ” အမေလည်း လိုက်ငိုပါတယ်
” ” အမေ ကိုချစ်လား ” ” ချစ်ပါတယ် ” ” မင်းကိုဘယ်သူက ဝမ်းနည်းအောင် လာလုပ်တာလဲ၊ မင်းဒီလိုခံစားနေရအောင် ဘယ်သူကလာလုပ်တာလဲ၊ ဟိုအမျိုးသား ပေါ့ဟုတ်လား ” ကျွန်မ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်နေမိတယ်။ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြီ။
” အလုပ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံ အမေ ကိုပေးဖူးလား၊ ဈေးမှာဟင်းတွေတွေ့ရင် အမေဒါလေးကြိုက်တတ်တယ် ဆိုပြီးသတိယ တတ်လား၊ မင်းဘာဟင်းကြိုက်တတ်တာလဲရော မှတ်မိရဲ့လား၊
နေ့တိုင်းစားဖို့ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းတွေဟာ မင်းအကြိုက်လား၊ မင်း ချစ်သူ အကြိုက်လား၊ ဘာဖြစ်လို့များသူက မင်းရဲ့သွေးသားထဲထိရောက်အောင် ဩဇာလွှမ်းမိုး နေရတာလဲ” မင်းကိုသူ ဘာလို့ပစ်သွားရတာလဲ ဖြေလို့ရမလား…..
” ” သူ အသစ်ထပ်တွေ့သွားလို့ပါ ”” ဘာလို့သူ အသစ်ထပ်တွေ့သွားရတာလဲ ”
” မသိပါဘူး ” ပြောရင်း ကျွန်မ က မျက်ရည် သုတ်လိုက်ပါတယ် ”
” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒါဟာ သဘာဝ ပဲလေ၊ သဘာဝ ဆိုတာရော နားလည်ရဲ့လား၊ လူကောင်း ဟာကောင်းတာပဲတွေးမယ်၊ လုပ်မယ်၊ ပြောမယ်။
မကောင်းတဲ့သူရဲ့ အတွေးဟာလည်း မကောင်းတာပဲ ဖြစ်လာမယ်၊ ဘဝမှာ ဒီလို ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေတသက်လုံးကြုံချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူ ကိုပြန်လာခိုင်းလိုက်ပေါ့၊
ဒါပေမယ့် မင်းဘဝကိုပျော်ရွှင်စေချင်ရင်၊ အမေကိုဝမ်းမနည်းစေချင်ရင်၊ ဘဝကိုပိုကောင်းစေချင်ရင်၊ လူကောင်းတွေနဲ့သာတွေ့စေချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဘိုးတော့ လူတွေအသဲကွဲလို့သေတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ဒါပေမယ့် လူတွေဘာလို့သေတာလဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ မစဉ်းစားတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှုံးပေးလို့စိတ်ပျော့ညံ့လို့၊ သူ့အကြောင်းမတွေးရင် စိတ်ကူးထဲမှာတောင် မရှိတော့ရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းခံစားရတာတွေ သက်သာလာမယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာကို မလုပ်ဖို့တားဆီးလို့ရပေမယ့် စိတ် ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတာ တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒ မရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ကမင်းပိုင်တာပဲလေဒါလေးတောင် နိုင်အောင်မတားဆီးနိုင်ရင် မင်းဘဝမှာ တသက်လုံး အရှုံးပေးနေရပြီ။
အကယ်၍ စိတ်ကိုအနိုင်ရရင် တားဆီးနိုင်ရင်မင်း စိတ်မဆင်းရဲ ရတော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ မင်းကိုလာပြီးမကယ်နိုင်ဘူး၊ဘယ်ဆရာဝန် မှလည်း မင်းကိုပျောက်အောင်လာ မကုပေးနိုင်ဘူး။
မင်း ကိုကူညီပေးနိုင်တာဆိုလို့ မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့ အချိန်ပဲ ရှိတယ်။ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ဘယ်လိုနေလဲ။
” ” ဘာမှမတွေးတာမို့ နေလို့ကောင်းပါတယ် ” ” စိတ်ကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ပြီး ဆက်လုပ်ပါ၊ ဒါဟာအရမ်းကို ခက်ခဲလိမ့်မယ်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်ယူရမှာပေါ့။ အမေ ကိုသာ ပိုပြီးသတိယနေပါ။ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလာရင် အမေကိုရင်ဖွင့်ပါ။
သူ့ဆီကိုစိတ်တွေ မရောက်သွားအောင်စိတ်ကို သတိလေးနဲ့ထိန်းပါ။ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ သူမရှိလည်း မင်းနေနိုင်တာပဲ။ နောက်တော့နေတတ်သွားမှာပါ။ မင်းလွယ်လွယ်နဲ့ မသေနိုင်သေးပါဘူး မဟုတ်လား။
စိတ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဒီ့ပြင်အရာတွေမှာ စိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ပါနဲ့။ မကောင်းတဲ့သူဟာသူ့ ဘဝ နဲ့သူသွားလိမ့်မယ် ။
” ဘိုးတော်က အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်းကို လှမ်းနှိုက်ပြီး ကျွန်မကို ပြန်ပေးပါတယ်။ ” ဒီ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်း ကို ဘိုးတော် မယူပါဘူး။ ဘတ် ၂ သောင်းကိုမင်းပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဘတ် ၅ ထောင်က အမေ ကိုပေးလိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ဘတ် ၅ ထောင်ကိုမင်းယူပြီး အဝတ်အစားလှလှလေးတွေနဲ့ မျက်နှာ အသားအရေအလှပြင် ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီး မင်းကိုယ်မင်း ဒီ့ထက်ပိုကြည့်ကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ ”လို့ပြောပြီးတော့ ဘိုးတော် ကရီမောနေပါတယ်။
” ဘိုးတော် ပြောတာမှတ်ထားပါ၊လူတွေကို မယုံပါနဲ့၊ အပေါ်ယံ အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့၊ဘယ်ဘိုးတော် ဆီကိုမှနောက်မသွားပါနဲ့၊ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ စွဲလန်းစရာ ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ ပါလာပြီးသားပါ။
ဒီအရာတွေကို တခြားသူလာပြီး နှစ်သက်လား မနှစ်သက်ဘူးလား ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ မူတည်နေပါတယ်။တချို့လူတွေက အဝတ်အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်တွေ ဝတ်ထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ရင်းကလေးကတော့ လူစိတ်ကိုမရှိကြတာ အမှန်ပဲ။
မင်းကမိန်းခလေးဆိုတော့ ပိုတောင် သတိ ရှိသင့်တယ်။ လူကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့၊ လူယုတ်မာနဲ့တွေ့ရင် ခန္ဓာကိုယ်၊ ပိုက်ဆံ၊ အသဲနှလုံးတွေလည်း ဆုံးရှုံးရမယ်။
မင်း ညံ့လို့ဒီလိုခံရတာမို့ ဘယ်သူ့အပြစ်လဲ လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ သူများတွေကို ရင်ဖွင့်ပြဖို့လည်း မသင့်တော်လှဘူူး။ မင်းရှေ့ဆက်မတိုးနဲ့ ဒီမှာတင် ရပ်လိုက်ပါတော့။
ဒီလိုမျိုး ဒီ့ပြင် ဘိုးတော်ေ တွေဆီလည်း ထပ်မသွားပါနဲ့တော့။ ဘိုးတော် ဆုံးမတာတွေကို သေချာမှတ်ထားပါ။ ဒီနေ့မင်းချစ်သူ လာလိမ့်မယ်။ မင်းဘာမင်း ဘာလုပ်သင့်လဲ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ ” ကျွန်မလည်းအခန်းကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေ အားလုံးကို အသေးစိတ် ပြန်တွေးနေမိတယ်။
ကျွန်မရဲ့နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုတွေ၊ အရင်ကဆို သူ့ကို သတိယတိုင်း ကျွန်မ မနေတတ်အောင်ခံစားရတယ်၊ အခုတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုး မခံစားရတော့ဘူး။ အရင်ကက ျွန်မ ရဲ့ ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်တွေဟာ အခုဆို အရမ်းမာလာတာ တွေ့ရတယ်။
ဘယ်အချိန်ထဲက ကျွန်မ ဒီလို ခံနိုင်ရည် ရှိလာတာလဲ မသိတော့ပါဘူး။ သူ့ကိုလွမ်းတိုင်း တမ်းတစွာ ကျလာတတ်တဲ့ မျက်ရည် တွေလည်း အခုတော့ ဘယ်ပျောက်ကုန်ပြီ လည်းမသိတော့ပါဘူး။
ဘိုးတော် ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကတော့ နားနှစ်ဘက်ထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။အခုအချိန်ကစပြီး ကျွန်မပြတ်သားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးခေါက်သံ ကြားရပါတယ်။
” ဘယ်သူလဲ ” လို့ကျွန်မ မေးလိုက်ပါတယ်။ ” ငါပဲဟေ့ ” လို့ဖြေသံကြားတော့ ဘိုးတော် ပြောထားတာမှန်နေတာပဲ သူတကယ်လာတယ်။
ခုနက ပြတ်သား တင်းမာနေတဲ့ စိတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ၊နှလုံးခုန်မြန်လာပြီ၊ စိတ်တွေလည်း ပျော့ညံ့စပြုလာပြီ၊ ” ဘာကိစ္စ ရှိလို့လဲ ” လို့အခန်းတံခါးမဖွင့်ပေးပဲ မေးလိုက်တယ်၊” ငါ သတိယလို့ပါ အခန်းတံခါးလေးဖွင့်ပေးပါအုံး
” ကျွန်မတွေဝေစပြုလာပြီ မျက်ရည်တွေစကျလာပြီ ဘယ်လိုများ လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ ဘိုးတော်ဆုံးမထားသံတွေ ပြန်ကြားယောင်လာတယ်၊ အမေ့ကိုလည်း သတိယတယ်။
” ပြန်လိုက်ပါအုံးနော် ဒီနေ့ကျွန်မစကားမပြောချင်သေးဘူး။ အခု ဒီမှာအမေလည်းရောက်နေတယ်၊ ပြန်ပါတော့ ”လို့ညာပြောလိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေ သိပ်မတင်းမာနိုင်သေး၊မပြတ်သားနိုင်သေးတာမို့ ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရင်ကျွန်မ အရင်လိုပဲ သူ့ကိုပြန်သံယောဇာဉ် ရှိလာမိမှာမို့ အမေ ကိုအကြောင်းပြပြီး လိမ်လိုက်ရတာပါပဲ။
ဒီနေ့အထိ ကျွန်မ ဘဝ အသစ်ကို အစပျိုးပေးသူ ဘိုးတော် ထံမှာ ကျွန်မ တပည့်ရင်း အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ ဘိုးတော်နဲ့သာမတွေ့ရင် ကျွန်မဘဝ လည်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မတွေးရဲတော့ပါ။
လူဆိုး လူလိမ် တွေနဲ့တွေ့ပြီးဘာတခုမှမကျန်အောင် အကုန်ဆုံးရှုံး ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကို ပြောချင်တာကတော့ ဘိုးတော် တွေဆိုတာ ဒီလိုကောင်းသူမျိုး ရှာရခက်ပါတယ်လို့ သတိပေးချင်တာပါပဲ
ကလေးတွေပုံဆွဲထားတဲ့အတိုင်း တိရိစ္ဆာန်တွေကို Photoshop နဲ့ရယ်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့အမျိုးသား
အသက် ၁၀၀ ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ယောက်တည်း ချုံမြက်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ အဘွား . . .